“Ndandicinga ukuba kuza kuba nzima ukuyiqonda into ethethwa yiBhayibhile.”—UJovy
“Ndandicinga ukuba iyadika.”—UQueennie
“Xa ndandibona indlela iBhayibhile enkulu ngayo, ndaphelelwa ngumdla wokuyifunda.”—UEzekiell
Wakha wacinga ukufunda iBhayibhile kodwa watyhafiswa zezi zinto sithethe ngazo ngasentla? Kwabaninzi kubonakala kunzima ukuyifunda. Kodwa uza kuthini xa uxelelwa ukuba inokukunceda wonwabe uze waneliseke ebomini? Futhi uza kuthini xa ufumanisa ukuba kukho iindlela ezinokukwenza ube nomdla wokuyifunda? Awunamdla wokuva ukuba iBhayibhile inokukunceda njani?
Khawuve ezi zinto zithethwa ngabantu abaqalise ukufunda iBhayibhile yaza yabanceda.
UEzekiel, osekuqaleni kwiminyaka yee-20 uthi: “Kwixa elidlulileyo, ndandifana nomntu oqhuba nje imoto engazazi nalapho aya khona. Kodwa ndathi ndakufunda iBhayibhile, ubomi bam banentsingiselo. Inamacebiso endinokuwasebenzisa kubomi bam bemihla ngemihla.”
UFrieda, naye osekuqaleni kwiminyaka yee-20 uthi: “Ndandikhawuleza ukuba nomsindo. Kodwa ukufunda iBhayibhile kwandinceda ndakwazi ukuwubamba. Loo nto yabangela ukuba abantu bangandonqeni, kangangokuba ngoku ndineetshomi ezininzi.”
UEunice, ibhinqa elikwiminyaka yee-50 uthi xa ethetha ngeBhayibhile, “Indinceda ndibe ngumntu obhetele, nditshintshe imikhwa engathandekiyo.”
Njengabo bafundi nabanye abaninzi, nawe iBhayibhile inokukunceda wonwabe ebomini. (Isaya 48:17, 18) Ezinye izinto enokukunceda kuzo zezi: (1) ukwazi ukwenza izigqibo ezifanelekileyo, (2) uzenzele iitshomi zokwenene, (3) umelane nestres, futhi (4) okona kubaluleke ngaphezu kwazo zonke, ufunde inyaniso ngoThixo. Icebiso eliseBhayibhileni livela kuThixo, ngoko alinakukukhupha ecaleni. UThixo akasoze akulahlekise.
Into ebalulekileyo kukuba uqalise ukuyifunda. Ngawaphi amacebiso anokwenza ungacingi kaninzi ngaphambi kokuba uqalise ukuyifunda futhi ukuthande?
mailto:?body=Kutheni Kufuneka Ufunde IBhayibhile?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2017005%26wtlocale%3DXO%26srcid=share⊂ject=Kutheni Kufuneka Ufunde IBhayibhile?